Beşikdüzüကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Flash ပြောဆိုချက်။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ61 TrabzonBeşikdüzü Cable ကားနှင့်သက်ဆိုင်သော Flash Claim
22 / 05 / 2020 61 Trabzon, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TELPHER
besikduzu ကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော Flash ပြောဆိုချက်
Trabzon Beşikdüzüမြူနီစီပယ်ကောင်စီ ၀ င်ÖnderÖztürkကကေဘယ်လ်ကားကုမ္ပဏီသည်Beşikdüzüရှိစာချုပ်ကိုဆန့်ကျင်။ ပြုမူသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Öztürkအောက်ပါမှတ်ချက်ချ; “ Beşikdüzü Cable ကား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုမလိုက်နာပါ။ စာချုပ်၏အပိုဒ် ၇ အရ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောလည်ပတ်ငွေကြေး၏ ၁၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုမြူနီစီပယ်မှ ၂၀၂၀ မေလ ၁၅ အထိမပေးဆောင်ပါ။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်7ပြီလကုန်အထိ 2019 ငွေလက်ကျန်ကိုမပေးခဲ့ပါ။ ဒီအခြေအနေကိုငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့အာရုံကိုငါတင်တယ်။ ဘယ်သူမှငွေမပေးနိုင်ကြဘူး
1- ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်Beşikdüzüမြူနီစီပယ်ဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သောကေဘယ်ကြိုးစက်ရုံများအတွက် TL သန်းသန်း ၁၂၀ သုံးစွဲခဲ့ပြီး၊ ဤပမာဏ၏ ၃၅ သန်းကို Iller Bank မှ ၁၅ နှစ်သက်တမ်းအနိမ့်ဆုံးချေးငွေဖြင့်ဖုံးအုပ်ခဲ့ပြီးမြူနီစီပယ်အရင်းအမြစ်များနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
2- Beşikdüzüမြူနီစီပယ်ကပြင်ဆင်သောတင်ဒါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ "Beisikdağခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သဘာဝအားကစားစင်တာရှိ Cable Car Facility အတွက် ၂၉ နှစ်တာကာလအတွင်းဟိုတယ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်း" ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းခံရခဲ့ပြီးGİZTAŞ A. named. ဒါဟာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
3- လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်Giztaş A. after ကုမ္ပဏီသည်တင်ဒါအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်စာချုပ်ပါတာဝန်များကိုကျေပွန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စာချုပ်ပါသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်အညီBeşikdüzüမြူနီစီပယ်နှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများကြောင့်စာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
4- GiztaşA.Şကုမ္ပဏီသည်Beşikdüzüမတိုင်မီ Afyon မြူနီစီပယ်၏ Tele-tendender တင်ဒါကိုအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်စည်ပင်သာယာနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးတွင်သက်ဆိုင်ရာမြူနီစီပယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတ်လ ၃၀ ရက်တွင်ဤမြူနီစီပယ်နှစ်ခုကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်များသည်တင်ဒါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စာချုပ်မှပေါ်ပေါက်လာသောအခွင့်အရေးကို အသုံးပြု၍ ရပ်စဲခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်အားပေးပြီးမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 သန်း TL ဖြစ်သောကုမ္ပဏီ၏အပေါင်ပစ္စည်းကိုမြူနီစီပယ်မှဝင်ငွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
5- Beşikdüzüမြူနီစီပယ်ရပ်စဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းGiztaşကုမ္ပဏီသည်စာချုပ်ကြောင့်ဖြစ်သော COMMON RECEPTION option ကိုအသုံးပြုလိုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ AFRİNAအမည်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်စာချုပ်အသစ်ကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စာချုပ်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းမည်ဟုကတိပေးပြီးစာချုပ်အသစ်ကိုမြူနီစီပယ်၊ Giztaşနှင့် Afrina နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
6- Afrina ကုမ္ပဏီသည်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ စာချုပ်နှင့်အညီသူသည်ဘတ်ငွေ ၁၀ သန်းကိုBeşikdüzüမြူနီစီပယ်အားပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနေသောအတိုးနှုန်းများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ခြေဘူတာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကားရပ်နားရာနေရာများနှင့်စျေးဝယ်စင်တာများကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးအထက်ပိုင်းတွင်လည်းစည်ပင်သာယာမှ ၁၃.၄၂ အထိဆောက်လုပ်ခဲ့သောကမ္ဘာ့ပုံစံဟိုတယ်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတင်ဒါသတ်မှတ်ချက်များအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်။
7- ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတ်လ ၃၀ ရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးအာဏာရလာသည့်မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် Teleferik ကုမ္ပဏီအားတရားမ ၀ င်ဆင်ခြေတစ်ခုဖြင့်ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Trabzon မြို့တော်စည်ပင်သာယာညီလာခံတွင်အာရပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်မြို့တော်ဝန်၏ကံမကောင်းစကားများ (ကျောက်တုံးကျောက်တုံးကိုကောက်။ ချန်ထားပါ။ Beşikdüzüမှထွက်ခွာကြပါစေ) ။ စာနယ်ဇင်းများတွင်ပါ ၀ င်သောအခါအာရပ်သည်ကေဘယ်လ်ကားစက်ရုံမှထွက်ခွာ။ Beşikdüzüမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးသည်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်သောGiztaşနှင့်အတူရှိနေသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ မေလ ၂၀၂၀ တွင်စီရင်ချက်သုံးပုံနှစ်ပုံကိုမြှို့နယ်ကစုဆောင်းခဲ့သည်။
8- အာရပ်မိတ်ဖက်ထွက်ခွာသွားသည့်အခါဆောက်လုပ်မှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဟိုတယ်တစ်ထပ်၏သံမှိုနှင့်သံကိုချုပ်ထားသည်ဆိုလျှင်၎င်းထုတ်လုပ်မှုကိုဖျက်သိမ်းသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိသံဖြူဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ကုန်းပတ်၌ယက်ထားသောသံဖျာတစ်ခုအတွက်လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
9- မြူနီစီပယ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၏သတိပေးချက်များနှင့်သတိပေးချက်များအားလုံးရှိသော်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်စာချုပ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှမလုပ်ဆောင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်များ၏စုစုပေါင်းငွေကြေးတန်ဖိုးမှာ TL သန်း ၂၀ ဖြစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာနှင့်အတူမြို့တော်ဝန် Ramis Uzun Bey ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၁ တွင်လာသည်။ ကုမ္ပဏီအားစျေးဝယ်စင်တာအတွက် ၆ လတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ဘူတာရုံခွဲတွင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလတွင်ယခုထုတ်လုပ်မှုတွင်ရေဘေ့စ်သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ဤအချိန် extension ကိုလုံးဝဥပဒေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၀၊ ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင်အထက်ဘူတာတွင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများပြီးစီးရန်အတွက် Cable Car Operations ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့အထိလက်သည်းများကိုပင်မထိုးနိုင်သေးပါ။
10- မြူနီစီပယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကုမ္ပဏီအား ဆက်လက်၍ ဆက်လက် ဦး စားပေးမည်လား၊ သို့မဟုတ် Afyon မြူနီစီပယ်နှင့် Kocaeli Kartepe မြူနီစီပယ်များသည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်၊ ကုမ္ပဏီမှရရှိသော ၀ င်ငွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်တင်ဒါအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်စာချုပ်များအရရပ်စဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်မည်လား။ မဟုတ်ပါကသမ္မတနှင့်လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များသည်စာရင်းကောင်စီနှင့်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏စစ်ဆေးမှုများအတွင်းရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်နေကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်တရားမ ၀ င်သောအပြုအမူများနှင့်အများပြည်သူအားထိခိုက်နစ်နာစေရန်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ရလဒ်အများပြည်သူဆုံးရှုံးမှုသက်ဆိုင်ရာသူတို့အားသိမ်းယူလိမ့်မည်။ ငါတို့စောင့်ကြည့်မယ် (ရင်းမြစ် - အပိုဒ် ၆၁)
... Flash ကိုရေလွှမ်းမိုးflaş..flaş ... သူBaşpınarအတွက် (ဗီဒီယို) ကိုမီးရထားရိုက်ချိုး
Sivas ပြည်နယ်ညီလာခံအစည်းအဝေး၏စွပ်စွဲချက် Related အစာရှောင်ရထား Shock!
Pekşenထံမှ CHP3။ စိတ်ဝင်စားစရာလေဆိပ်အမည်စွပ်စွဲချက်မှ Related
စွပ်စွဲချက်များမှ Related ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
"သီးခြားမတော်တဆမှုဘေးအန္တရာယ်2ပိုပြီးအတိုင်ခဲ့": အရေးဆိုမှု Stunning YHT-Related မတော်တဆမှု
Çorluအတွက် Related စွပ်စွဲချက်ကိုမြွေပူရာကင်းရထားဘေးအန္တရာယ်! .. အထောက်အထားဘောလုံးကိုစွပ်စွဲခဲ့သည်
Flash ကို! .. Flash ကို! .. အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသစ်မက်ထရိုယနေ့ဖွင့်လှစ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
Trabzon စီစဉ်ထားလမ်းရထား Related Flash ကိုဖျေါပွခကျြ
MI Distributed TCDD မြှင့်တင်ရေးစာမေးပွဲမေးခွန်းများအတွက်စွပ်စွဲချက် Shock ကတာဝန်
cable ကိုကားတစ်စီးအခန်းများအတွက်မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်. Beşikdüzü
ကံကောင်းထောက်မစွာ, cable ကိုကားတစ်စီးBeşikdüzüဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
Adana ရထားဘူတာအကြောင်း! Adana ရထားဘူတာ၊ ရထားဘူတာများနှင့်ရထားဘူတာ၏သမိုင်းကိုလေ့လာခြင်း
ပြီးစီး Black ကအရှည်ဆုံးအကွာအဝေးBeşikdüzü Ropeway စီမံကိန်း
Beşikdüzü Ropeway Project ထဲတွင်အဆုံးသတ်ချဉ်းကပ်